हामीले फोनमा कुराकानी गर्दा हेल्लो भन्छम् यस्को अर्थ के हो त ? - Khula Patra
हामीले फोनमा कुराकानी गर्दा हेल्लो भन्छम् यस्को अर्थ के हो त ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ०८, २०७७
प्रकाशित समय: १६:०९:३०
हामीले सानैबाट फिल्म, टेलिभिजन सुन्दै हर्दै आएका छौँ पछिल्ला केही दशकयता आफैले टेलिफोन उठाउने बित्तिकै प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो, ‘हेल्लो’ । हेल्लो भन्ने शब्द दुई पक्ष बाट नै आउछ हामी फोन उठाउन शाथ एकअर्कामा गफ गर्नु अगि पनि हेल्लो भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने गरेका छौँ चाहे त्यो शुखको क्षण सुनाउनलाई होस या दुखद घटनाको बारेमा भन्नलाई होस हाम्रो मुखबाट निस्किने शब्द हो हेल्ले । तर तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, फोनमा सबैभन्दा पहिले किन ‘हेल्लो’ भनिन्छ ।
आजको आधुनिक युगमा प्रायः हरेक मानिसको हातमा मोवाइल फोन छ । मोबाइल हाम्रो दैनिक जीवनमा अपरीहार्य बनिसकेको छ हाम्रो सानो सानो कुराहरुलाई बाँडन पनि हामी फोनको प्रयोग गर्छाै। यस्तोमा चाहे मोवाइलमा होस् चाहे ल्याण्डलाइन फोनमा सबैले फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो बोल्ने शब्द हो, ‘हेल्लो’ । तर यो शब्द कसरी शुरू भयो त
टेलीफोनको आविष्कारपछि क्रमशः यसको प्रयोग शुरू भयो । त्यसक्रममा मानिसहरु आर यू दियर भनेर कुराकानी शुरू गर्दथे । त्यस क्रममा थोमस एडिसनले एहोइ ९ब्जयथ० शब्द सुने त्यसपछि उनले सन् १८७७ मा एहोईको सट्टा हेल्लो भन्न थाल्ने प्रस्ताव गरे । पिट्सबर्गको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट एण्ड प्रिण्टिग टेलीग्राफ कम्पनीबाट उक्त प्रस्ताव पास भएपछि हेल्लो शब्द चलनचल्तीमा आयो ।